Muuri News Network » Ugaas Axmed Ugaas Sayid cali Ugaas Xuseen Oo ka hadlay Dhibaatada ay Amisom ka Wado Magaalada Marka
Ugaas Axmed Ugaas Sayid cali Ugaas Xuseen Oo ka hadlay Dhibaatada ay Amisom ka Wado Magaalada Marka
Ugaaska guud ee beesha Biimaal Ugaas Axmed Ugaas Sayid cali Ugaas Xuseen ayaa ka hadlay dilalka soo laalaabtay ee ciidamada AMISOM u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Makro ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ugaas Axmad oo u muuqday inuu aad uga carooday falalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Marko ayaa sheegay in ciidamada AMISOM loo keenay dalka Soomaaliya iney nabad dhaliyaan oo aan loo keenin iney colaad iyo dilal arxan daro u geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Ugaaska ayaa sheegay in wax laga damqado tahay qeylo dhaanta mar walbaa kasoo yeerta shacabka ku nool magalaada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose., Ugaaska ayaa ka dalbaday AMISOM iney joojiso falalka ay ka geysaneyso magaalada Marko iyo guud ahaan gobolka.
Isagoo sii hadlaya ayuu sheegay :in ciidamada Amisom ay kula xisaabtami doonaan Xasuuqii ay ka geesteen Magaalada Marka. ee ciidamada Amisom uma i manin iney shacabka gumadan ee haddii ay san nabad ka dhigi karin dalka Soomaaliya. ha iskaga noqdaan wadan kii ay ka yimadeen